JINHUA WENTUTHUZELO VEHICLE.CO., Ltd yinkampani Unako Thembela kwaye Ifunyanwa Jinhua, kwiPhondo Zhejiang, China, leyo usekela iinjongo zayo lothutho eluhlaza kunye namandla okonga kwaye sinike abantu ukuziva ukhwele esempilweni kwaye bekhululekile. Le nkampani kakhulu utywala kwaye bathengise iintlobo ezahlukeneyo e-Bikes, ngezithuthuthu ukuhamba, izitulo ezinamavili zombane njl
Ngokusekelwe kuphuhliso & kwimveliso amandla ethu, inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, kunye namava osisityebi ukurhweba kwiimarike ezahlukeneyo. Siyazi njani ukunikela imveliso elungileyo kunye nenkonzo elungileyo abangenisa kunye abasasazi kulo lonke ihlabathi. OEM / ODM kunye nenkonzo ulwenziwo ezithile ziyafumaneka. Kwaye kwakhona ukunika iingcebiso ngantoni abathengi abatsha xa kuyimfuneko.
JINHUA WENTUTHUZELO VEHICLE.CO., LTD usoloko ufuna amaqabane ezoshishino elitsha naphi na ehlabathini wena. Ekubeni izitifiketi of EN15194, CE, ul, ROHS ezikhoyo ukuvumela wena ukungenisa ngokulula eYurophu okanye kwindawo nganye wena.
JINHUA WENTUTHUZELO VEHICLE.CO., LTD sakwamkela kunye nabasebenzi ezizodwa kakhulu, zonke amava atyebileyo kummandla Bikes zombane kunye ngezithuthuthu yokuhamba.